Agaasimihii Hay’adda Nabad Suggida oo Magaalada Khartoum iska xaadariyay – idalenews.com
Agaasimihii hore ee Nabad Sugidda Soomaaliya oo ka qeyb galaya Shirweynaha Axsaabta Afrika oo maanta ka furmay Dalka Sudan.
Wafdi heer sare ah oo ka kala socda Dowladaha Afrika iyo Eeshiya ayaa maalmahan ku soo qolqolayay Magaaladda khartuum ee Xarunta Wadanka Sudan, kuwaasi oo Casuumaad Rasmi ah ka helay Xisbiga Talada haaya ee Dalka Sudan (Mu’tamar Wadani).
Wafdigan ayaa ka qeyb galaya Shirka Axsaabta Afrika oo maanta si toos ah uga furmay Caasimadda Khartuum , waxaana looga hadlayaa sidii Axsaabta Dowladaha Afrika talada ka haaya ay u wada shaqeyn lahaayeen , islamar ahaantaana loo xoojin lahaa Xiriirka ka wada dhexeeya Axsaabtaasi.
Shirkana ayaa Soomaaliya uga qeyb galaya Wafdi ka socda Xisbiga Nabadda iyo Horumarka iyo Agaasimihii hore ee Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed Axmed Maclin Fiqi oo maalinta shalayto aheyd ka soo degay Garoonka Caalamiga ee Khartuum .
Agaasimaha ayaa Safarkiisa ku weheliya Guddoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Ceynte iyo Xoghaye-hiisa Dr.Maxamed Ibraahim.
Shirkan maanta ka furmay Magaaladda Khartuum Ee xarunta dalka Sudan ayaa socon doona labo Maalmood, waxaana la filayaa inta uu socdo shirkan in laga soo saaro War-Murtiyeed ku aadan sidii ay Siyaasadda Afrika halmeel la isu keeni lahaa, islamar ahaantana loo xoojin lahaa Dimoqraadiyadda iyo Awoodaha Shacabka Afrika.